Fepetran'ny serivisy - Molooco
Ity tranonkala ity dia miasa amin'ny Molocoo LLC. Mandritra ny tranokala, ny teny hoe "we", "us" ary "our" dia manondro Molokao.com. Molokao.com dia manolotra ity tranonkala ity, ao anatin'izany ny fampahalalana rehetra, ny fitaovana ary serivisy rehetra azo avy amin'ity tranokala ity aminao, ilay mpampiasa, mifanaraka amin'ny fanekena ny teny rehetra, ny fepetra, ny politika ary ny fampahalalana voalaza eto.
Fanamarihana: Satria ny baiko rehetra dia esorina avy any Chine dia tsy mandray andraikitra amin'ny aretina rehetra izahay.
Manaiky ianao tsy hamerina, hamoahana, kopia, hivarotra, hividy na hampiasana ny ampahany amin'ny Service, fampiasana ny serivisy, na ny fidirana amin'ny serivisy na fifandraisana amin'ny tranonkala amin'ny alàlan'ny fanolorana ny serivisy, tsy misy fanoratana nanoratra an-tsoratra .
Ireo lohateny ampiasaina amin'ity fifanarahana ity dia ampidirina fotsiny ho an'ny fanamoriana ary tsy hametra na ahisy fiantraikany amin'ny antsipiriany ireo fepetra ireo.
FIZARANA 3 - FAHASALAMANA, FAHAMASINANA, ARY FOTOAM-PAHASAM-PAHASALAMANA
Ny vokatra na serivisy sasany dia azo alaina amin'ny aterineto amin'ny alàlan'ny tranonkala. Ireo vokatra na serivisy ireo dia mety be dia be ary mety hiverina na hiova raha tsy araka ny filantsika Politika famerenana.
Miaro ny tsara isika saingy tsy voatery, hamerana ny fivarotana ny vokatra na ny Services ho an'ny olona, ​​faritra ara-jeografia na ny juridiction. Azontsika atao ny manatanteraka izany zo izany amin'ny raharaha mitranga. Isika dia mametraka ny zo hametra ny habetsaky ny vokatra na ny tolotra omentsika. Ny filazalazana rehetra momba ny vokatra na ny vidin'ny vokatra dia mety miova na oviana na oviana tsy misy filazana, amin'ny fahamendrehana. Mijanona ny zo hanakana ny vokatra amin'ny fotoana rehetra. Ny soso-kevitra ho an'ny vokatra na serivisy natao tamin'ity tranonkala ity dia voaozona izay voarara.
Izahay dia manana zo handà ny filaminana napetrakao aminay. Azontsika atao, araka ny fiheverantsika irery, ny mametra na manafoana ny fividianana olona tsirairay, isaky ny tokatrano na isaky ny baiko. Ireo fetra ireo dia mety misy ny baiko napetraka na ao ambanin'ny kaonty mpanjifa, mitovy karatra mitovy aminy, sy / na baiko izay mampiasa ny adiresy fandoavam-bola sy / na adiresy fandefasana. Raha manova fanovana na manafoana baiko isika, dia azontsika atao ny manandrana mampahafantatra anao amin'ny alàlan'ny hifandraisana amin'ny mailaka sy / na ny adiresy na laharana finday / nomeraon'ilay fotoana nanaovana ny baiko. Izahay dia manana zo hametra na mandrara ny baiko izay, amin'ny tenantsika manokana, dia toa napetrak'ireo mpivarotra, mpivarotra na mpaninjara.
Manaiky ny hanome anao ny mividy sy ny fampahafantarana ny kaonty vaovao sy marina ary marina momba ny fividianana rehetra natao tao amin'ny fivarotana. Manaiky ny hanavao ny kaontinao sy ny fampahalalana hafa ianao, anisan'izany ny adiresy mailaka sy ny laharan-tariby ary ny daty fandaniana mba hahafahantsika mamita ny fifanakalozanareo ary mifandray aminao araka izay ilainao.
Ny votoatiny, ny vokatra ary ny serivisy sasany azo alaina amin'ny alàlan'ny serivisinay dia mety misy ireo fitaovana avy amin'ireo antoko fahatelo.
FIZARANA 9 - FANOMPOANA ARA-PAHASALAMANA, FANAVAHANA, ary fanekena hafa
Ny fandefasanao ny mombamomba anao amin'ny alàlan'ny fivarotana dia tanterahinay politika fiarovana fiainan'olona.
FIZARANA 11 - FAHADISOANA, TSY FITSIPIKA ARY NY FANAMPIANA
Tsy adidintsika ny manavao, manitsy na manazava ny fampahalalana ao amin'ny serivisy na amin'ny tranonkala mifandraika amin'izany, anisan'izany tsy misy fetra, fampahafantarana ny vidiny, raha tsy araka ny lalàna. Tsy misy famoaham-baovao na daty famerenana ampiharina amin'ny Service na amin'ny tranonkala mifandraika dia tokony horaisina mba hanondroana fa ny fampahalalana rehetra ao amin'ny Service na amin'ny tranonkala mifandraika dia novaina na novaina.
Na izany na tsy izany, ny molooco.com, ny talenay, ny tompon'andraikitra, ny mpiasa, ny mpiara-miasa, ny mpandraharaha, ny mpifaninana, ny mpampiofana, ny mpamatsy, ny mpanome tolotra na ny mpanome lisansa dia tompon'andraikitra amin'ny ratra, fatiantoka, fitakiana, na mivantana, tsy mivantana, sendra, manasazy, manokana , na fahasimbana vokatr'izany amin'ny karazana rehetra, ao anatin'izany, tsy misy fetrany ny tombom-barotra very, ny fidiram-bola very, ny tahiry very, ny fahaverezan'ny data, ny vidin'ny fanoloana, na ny fahasimbana mitovy amin'izany, na mifototra amin'ny fifanarahana, tort (ao anatin'izany ny tsy fitandremana), tompon'andraikitra henjana na hafa avy amin'ny fampiasanao ny serivisy na ny vokatra azo tamin'ny alàlan'ny serivisy, na ho an'ny fangatahana hafa mifandraika amin'ny fomba fampiasana ny serivisy na vokatra, ao anatin'izany, fa tsy ferana amin'ny, lesoka na hadisoana amin'ny atiny rehetra, na fatiantoka na fahasimbana na inona na inona nateraky ny fampiasana ny serivisy na ny atiny (na vokatra) navoaka, na nafindra, na natao tamin'ny alàlan'ny serivisy, na dia notoroana hevitra momba ny fahafaha-manao aza izy ireo. Satria ny fanjakana na ny faritra sasany dia tsy mamela ny fanilihana na ny fetran'ny andraikitra noho ny fahasimbana vokatr'izany na amin'ny tranga hafa, amin'ny fanjakana na faritra toy izany, ny adintsika dia voafetra amin'ny fetra farany ambony avelan'ny lalàna.
Manaiky ianao handoa onitra, hiaro ary hihazona molooco.com tsy manimba sy ny ray aman-dreninay, ny zanatsika, ny mpiara-miasa, ny mpiara-miasa, ny tompon'andraikitra, ny talen'ny, ny mpandraharaha, ny mpifaninana, ny mpamatsy vola, ny mpamatsy tolotra, ny mpamatsy vola, ny mpamatsy, ny mpampiofana ary ny mpiasa, tsy misy atahorana na inona na inona fangatahana, ao anatin'izany ny saram-pandresen'ny mpisolovava mety, ataon'ny antoko fahatelo noho ny fanitsakitsahana ireo fepetra momba ny serivisy ireo na ny antontan-taratasy ampidirin'izy ireo amin'ny alàlan'ny fanondroana na ny fandikana lalàna na zon'ny antoko fahatelo.
Ireo fepetra momba ny serivisy sy ireo politika na fitsipika mifehy azy ireo izay napetrakay tamin'ity tranokala ity na momba ny serivisy dia mandrafitra ny fifanarahana sy ny fahatakarana rehetra eo aminareo sy ny fitantanana ny fampiasana ny serivisy, izay nanoloana ireo fifanarahana na fifanarahana teo aloha, na fifandraisana ary tolo-kevitra. , na am-bava na an-tsoratra, eo anelanelananao sy izahay (anisan'izany, fa tsy voafetra ihany, misy ireo dikan-dalàna teo aloha voafaritry ny Serivisy fanompoana).
Ireo fepetra momba ny serivisy ireo sy ireo fifanarahana misaraka izay omenay anao ny serivisy dia hifehezana sy harahina mifanaraka amin'ny lalàn'i Etazonia.
FIZARANA 19 - NY fiovana amin'ny serivisy
FIZARANA 20 - FIVORIANA FIVORIANA